ဟယ်လီကြယ်တံခွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဟယ်လီကြယ်တံခွန် (Halley's Comet သို့မဟုတ် Comet Halley; /ˈhæli/ သို့မဟုတ် /ˈheɪli/) ကို 1P/Halley ဟု တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းသည် ၇၅-၇၆ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ကမ္ဘာမှ မြင်တွေ့နိုင်သော ပတ်လမ်းလှည့်သက်တမ်းတိုကြယ်တံခွန် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာမှနေ၍ ပကတိမျက်စိဖြင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ မြင်နိုင်ပြီး လူတစ်ယောက်၏ဘဝတွင် နှစ်ကြိမ်သာမြင်တွေ့ခွင့်ရနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော လူသိများသည့် ပတ်လမ်းလှည့်သက်တမ်းတိုကြယ်တံခွန် ဖြစ်သည်။
၁၆၈၂ ခုနှစ်တွင် နာမည်ကျော် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး သင်္ချာနှင့် နက္ခတ်ဆရာကြီး အက်မော ဟေလီသည် အလွန်တောက်ပသော ကြယ်တံခွန်ကြီးတစ်လုံးကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးနောက်၊ ထိုကြယ်တံခွန်သည် နောက် ၇၆ နှစ်ကြာ၍၊ ၁၇၅၈ ခုနှစ်သို့ရောက်လျှင် ကမ္ဘာမှမြင်နိုင်အောင် ပြန်လာလိမ့်မည်ဟု ကြိုတင် အဟောထုတ်ခဲ့လေသည်။ ဤသို့ အဟောထုတ်ခဲ့သည့်အတိုင်း ထိုကြယ်တံခွန်သည် ၁၇၅၈ ခုနှစ်၌ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပေသည်။ ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သူ နက္ခက်ဆရာကြီး၏ အမည်ကို အစွဲပြု၍၊ ထိုကြယ်တံခွန်ကိုလည်း ဟယ်လီကြယ်တံခွန်ဟု ခေါ်ကြသည်။ ဟယ်လီကြယ်တံခွန်သည် ၇၆ နှစ်တွင် တစ်ကြိမ် ကမ္ဘာသို့ ချဉ်းကပ်လာ၍၊ နောက်ဆုံးအကြိမ် ပေါ်ခဲ့သောနှစ်မှာ ၁၉၈၆ ခုနှစ် ဖြစ်လေသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်မြင်တွေ့နိုင်မည့် အချိန်မှာ ၂၀၆၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၈ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀၀ ၁.၀၁ ၁.၀၂ ၁.၀၃ ၁.၀၄ ၁.၀၅ ၁.၀၆ ၁.၀၇ ၁.၀၈ ၁.၀၉ ၁.၁၀ ၁.၁၁ ၁.၁၂ Donald K. Yeomans။ Horizon Online Ephemeris System။ California Institute of Technology, Jet Propulsion Laboratory။ 8 September 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ What Have We Learned About Halley's Comet?။ Astronomical Society of the Pacific (No.6– Fall 1986) (1986)။ 16 December 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ JPL Small-Body Database Browser: 1P/Halley။ Jet Propulsion Laboratory။ 13 October 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Halley, comet's mass loss and age" (1987). Il Nuovo Cimento C 10 (5): 587–591. Italian Physical Society. doi:10.1007/BF02507255. Bibcode: 1987NCimC..10..587C. [လင့်ခ်သေ]
↑ "Is the nucleus of Comet Halleyalow density body?" (1988). Nature 331 (6153): 240–242. doi:10.1038/331240a0. Bibcode: 1988Natur.331..240S.
↑ S. J. Peale (1989). "On the density of Halley's comet". Icarus 82 (1): 36–49. doi:10.1016/0019-1035(89)90021-3. Bibcode: 1989Icar...82...36P. “densities obtained by this procedure are in reasonable agreement with intuitive expectations of densities near 1 g/cm3, the uncertainties in several parameters and assumptions expand the error bars so far as to make the constraints on the density uniformative ... suggestion that cometary nuclei tend to by very fluffy, ... should not yet be adopted asaparadigm of cometary physics.”
↑ "Rotation of Halley's Comet" (1989). Icarus 79 (2): 396–430. doi:10.1016/0019-1035(89)90085-7. Bibcode: 1989Icar...79..396P.
↑ R. R. Britt (29 November 2001)။ Comet Borrelly Puzzle: Darkest Object in the Solar System။ Space.com။7August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 December 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ New Image of Comet Halley in the Cold။ European Southern Observatory (1 September 2003)။ 20 August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 February 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kronk၊ Gary W.။ 1P/Halley။ cometography.com။
↑ "The long-term motion of comet Halley" (in en) (1 December 1981). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 197 (3): 633–646. doi:10.1093/mnras/197.3.633. ISSN 0035-8711. Bibcode: 1981MNRAS.197..633Y.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟယ်လီကြယ်တံခွန်&oldid=738269" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၃:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။